ရထားတွင်စားရန်အကောင်းဆုံးအစားအစာဘာတွေလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ရထားတွင်စားရန်အကောင်းဆုံးအစားအစာဘာတွေလဲ
ရထားပေါ်တွင်စားစရာအကောင်းဆုံးအစားအစာများအမှန်တကယ်ယနေ့ခေတ်အလွန်အရသာရှိပါတယ်. များစွာသောရထား 5-ကြယ်ပွင့်နေရာထိုင်ခင်းပူဇော်သောကြောင့်နှင့် ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအစားအစာ. ဤလောက၏နာမည်ကြီးစားဖိုမှူးများကဖန်ဆင်းအစားအစာပါဝင်သည်. သငျသညျဖြစ်ကောင်းအံ့သြဖွယ်အကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းမှအသုံးပြုကြသည် မီးရထားဘူတာထဲမှာအစားအစာ သို့မဟုတ် လှပသောရှုခင်း သင်တစ်ဦးအပေါ်မြင်နိုင်ပါသည် ရထားခရီး. ဒါကြောင့်သင်ကမီးရထားပေါ်မှာစားနိုင်အစားအစာအညီအမျှလက်ရာမြောက်သောကြောင်းကိုသင်အံ့သြသွားစေခြင်းငှါ,.
ဤတွင်ထိပ်များမှာ7သငျသညျအစာကိုစားနိုင်ပါတယ်ရထားပေါ်တွင်စားစရာအကောင်းဆုံးအစားအစာများ
1: Belmond ဗြိတိန် Pullman စ (U.K.)
ကနေဗြိတိန်မှာမြောက်မြားစွာနေရာများမှထွက်ခွာ လန်ဒန်, ဒီရထားဟာဒဏ်ငွေထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်း. ထမင်းစားခန်းအနုပညာရှင်စားဖိုမှူးအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအစားအစာများပါဝင်သည် တွမ် Kerridge နှင့် Anton Mosimann သူတို့ရဲ့အထက်တန်းလွှာဗြိတိန်ထမင်းစားခန်းကလပ်အသင်းများအတွက်ကြီးမှူးမတ်သူ.
2: Belmond ဟိရံ Bingham (ပီရူး)
ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အလှဆုံးနှင့်သာယာလှပခရီး. ဤသည်ဇိမ်ခံကား 1920 ရဲ့စတိုင်ရထား သောပီရူးကျေးလက်မှတစ်ဆင့်သွားရောက်ကာလက်ရာမြောက်သောအစားအစာများကမ်းလှမ်း. အဆိုပါလေး-သင်တန်းအင်ဒီးတျသှငျးခံ menu ကိုစပျစ်သီးနှင့်အပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းနှင့်အတူ crispy ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ယူကလစ်နှင့်အမဲသားကဲ့သို့အပျော်မွေ့ပါဝင်သည်.
3: အပြာရောင်ရထား (တောင်အာဖရိက) – ရထားပေါ်တွင်စားရန်အာဖရိကရဲ့အကောင်းဆုံးအစားအစာ
ဤသည်ရထားကမ်းလှမ်းမှု5အဖြစ်လူသိများစတားရိုးရာအစားအစာ “အတားအဆီးတွေအပြာရောင်,” အရာဒေသခံပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့မတူညီဟင်းလျာများပါဝင်သည်. ဥပမာအားဖြင့်ငှက်ကုလားအုတ်များအတွက်အရသာရှိတဲ့ခဲဘွယ်စားဘွယ်၏အချို့, တောင်အာဖရိကခရစ်ယာန်, နှင့်အမဲသား.
4: ဂရိတ်တောင်ပိုင်းရထား (သြစတြေးလျ)
အလားတူပင်အဆိုပါအပြာရောင်ရထားမှ, သင်ဤအပေါ်လတ်ဆတ်တဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်ရင်းမြစ်ထားတဲ့အစားအစာကိုခံစားနိုငျ သြစတြေးလျတောင်ပိုင်းရထား. အဆိုပါစားဖိုမှူး, ဒေသခံပေးသွင်း, နှင့်လယ်သမားများစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စပျစ်ရည်ကိုနှစ်ဦးစလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသောအနေနဲ့သြစတြေးလျအစားအစာဖန်တီးအံ့သောငှါစည်းဝေးကြပါပြီ. ရထားလည်းအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဟင်းလျာများပူဇော်အများအပြားစားသောက်ဆိုင် features. ဥပမာအားသားပိုက်ကောင်များအတွက်, saltbush နှင့်ရိုင်း rosella ပန်းပွင့်, barramundi နှင့်မာဂရက်မြစ် ဒိန်ခဲ.
5: Napa Valley ဝိုင်ရထား (ကယ်လီဖိုးနီးယား) – ရထားပေါ်တွင်စားရန်မရေိကအကောင်းဆုံးအစားအစာ
ဒါပေါ့, နာမတျော၏ဒီ type နဲ့ရထားကိုဝတျပွုပါမညျ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စပျစ်ရည်ကို အမြောက်အမြားအတွက်ကြောင့်လည်းအကြီးအအစားအစာတာဝန်ထမ်းဆောင်. အဆိုပါ3ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ရထားထဲမှာမျိုးစုံသင်တန်းအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အစားအစာများနှင့်အတူခရီးသည်များသည် 1917.
6: orient Express ကို (ဥရောပ)
ပထမဦးဆုံးဌာန၌, စကားတော် Orient Express ကိုဒဏ်ငွေထမင်းစားခန်းနှင့်အတူလက်-In-လက်သွားပါ. ဒါဟာကမ္ဘာကျော် ရထားခရီးသွားမှတ်တမ်း ဥရောပနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများမှတစ်ဆင့်လတ်ဆတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့အစားအစာများဟာရထားမှတ်တိုင်ပေါ်တွင်စုဆောင်း. ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်စားဖိုမှူး Yannick Alleno တော်ဝင်ပဲနဲ့တူဟင်းလျာများနှင့်အတူယခင်ခေတ်များအတန်းအစား recreated ထားပါတယ်, မှိုနှင့်အတူ Bresse ကြက်သား fricassee နှင့်လှော်ဆန်.
7: တော်ဝင် Scotsman (စကော့တလန်) – ရထားပေါ်တွင်စားရန်ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးအစားအစာ
ဒဏ်ငွေထမင်းစားခန်းရထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါတင်စာရင်းနောက်ဆုံး, ဒီရထားနှစ်ခုသမိုင်းဝင်ထမင်းစားခန်းကားများတပ်ဆင်ထား. သငျသညျထိုကဲ့သို့သော kippers သို့မဟုတ် Scottish နံနက်စာအဖြစ်ရိုးရာအစားအစာများကိုခံစားနိုငျ. ဒီရထားပေါ်တွင်ညစာအလွန်တရားဝင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, ဒါလူကြီးလူကောင်းအဆိုပါဟင်းလျာဘို့အသင့်လျော်စွာအကျီနှင့်မိန်းမစားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်ကြောင်းသေချာအောင်.
ယခုသင်စာဖတ်ခြင်းနှင့်အတူပြုသောအမှုဖြစ်ကြောင်းတွင်, ဒါကြောင့်သင်ရထားပေါ်တွင်အစာစားဖို့အကောင်းဆုံးအစားအစာများအဘယ်သို့ထင်ကြဘူး. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားမှာခရီးသည်များများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစားအစာများကိုဥရောပတစ်လွှားရထားကိုဖုံးလွှမ်း. ရထားလက်မှတ် booking ပိုမိုလွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှ. သင့်ရဲ့ရထားခရီးသွားဘွတ်ကင် ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်နှင့်ထက်လျော့နည်းအတွက်3မိနစ်သင်သည်သင်၏လမ်းခရီးဘို့ပြီးပြည့်စုံသောမီးရထားလက်မှတ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. အဓိက Credit Card ကိုအပြင်မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေနဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-meals-trains%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, သင်တို့အား / fr အဆိုပါ / ru ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
#အစားအသောက် ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား
ကျွန်မခရီးသွားကိုချစ်ပေမယ့်သင်ပြောမဟုတ်ငါ့ကိုမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး, ကျွန်မအခမဲ့ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာသူကိုစိတျဓာတျနဲ့ရထားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်ဖြစ်၏, သငျသညျအဘယျသို့ငါရေးနဲ့တူမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
အဘယ်ကြောင့်ရထားပို့ဆောင်ရေး၏အလုံခြုံဆုံး mode တစ်ခုဖြစ်တယ်
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ရထားခရီးသွားခြင်း, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား